လူကြိုက်အများဆုံးထိပ်တန်း 10 အိန္ဒိယကနေကျောက်အရောင်များ | Flodeal
လူကြိုက်အများဆုံးထိပ်တန်း 10 အိန္ဒိယကနေကျောက်
ထိပ်တန်း 10 အိန္ဒိယကနေကျောက်အရောင်များ
အိန္ဒိယကနေကျောက်ခက်ခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်, ကြာရှည်ခံသော, လှပစျေးသိပ်မကြီးတဲ့. အိန္ဒိယကျောက်ဂုဏ်အသရေနှင့်ခိုင်ခံ့သောသဘောသဘာဝအဘို့အလူသိများသည်.
ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 100 အိန္ဒိယကနေအဖြူကျောက်များနှင့်အနက်ရောင်ကျောက်အကြားအရောင်များ. အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ် 10 မတူညီတဲ့ကျောက်မတူညီတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရေပန်းစားသည်ကတည်းကကျောက်တခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ.
သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကျောက်ရှေးခယျြနိုငျ. ထိပ်နေကြသည်အောက်ပါ 10 အိန္ဒိယကနေကျောက်အရောင်များ :
မြစ် White ကကျောက်
alaska White ကကျောက်
မွန်း White ကကျောက်
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည် အိန္ဒိယကျောက် ကမ္ဘာအနှံ့. ဒါကအစိုင်အခဲအနက်ရောင်ကျောက်သည်နှင့်လည်းဂျက်က Black ကျောက်အဖြစ်ကိုခေါ်.
Absolute က Black ကျောက်၏ကျောက်မိုင်း Khammam အတွက်တည်ရှိသည်, Warangal, Chamrajnagar, Mysore, Shoolgiri, နှင့် Kanakpura အိန္ဒိယတွင်. သငျသညျမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်သတိရအောက်မေ့ကွက်များအောင်၌ဤအနက်ရောင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
ဒီကျောက်များ၏ပြားသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်ကြီးမားသောဂျမ်ဘိုအရွယ်အစားရရှိနိုင်ပါသည်. Absolute က Black ကျောက်၏ပြား မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်. ရရှိနိုင်အုပ်ကြွပ်ဒီကျောက်လည်းရှိပါတယ်.
tiles အမှတ်တရဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ backsplash, ရေချိုးခန်း, နှင့်အခင်း. သငျသညျတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ၌ဤကျောက်ဝယ်နိုင်, အထိမ်းအမှတ်အဘို့အကြွပ်နဲ့အထူပြား.
Black ကက Galaxy ကျောက်အိန္ဒိယကနေဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးအနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာရွှေငွေ flecks နဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အနက်ရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. လာသောအခါအလင်းအိမ်နှင့်အဆက်အသွယ်တွင်ဤ flecks ထွန်းလင်း.
ဒါဟာမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအတွက်လှပသောကြည့်, benchtops, မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဤသည်မှာအထိမ်းအမှတ်နှင့်အထိမ်းအမှတအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်.
က Galaxy ကျောက်ထိုကဲ့သို့သောအယ်လ်ဂျီးရီးယားအဖြစ်နိုင်ငံများတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကျောက်ဖြစ်ပါသည်, လစ်ဗျား, မော်ရိုကို, အင်ဒိုနီးရှား, အိုမန်, ယူအေအီး, ဆော်ဒီအာရပ်, ကာတာနိုင်ငံ, မလေးရှား, စင်္ကာပူစသည်တို့.
လူကြိုက်အများဆုံးကျောက်အရွယ်အစားကြီးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါများမှာ, သေးငယ်တဲ့ပြား, နှင့် 60x30x1.8 စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားအတွက်အုပ်ကြွပ်.
Black ကက Galaxy ကျောက်၏ကျောက်မိုင်း Andhra Pradesh ၏ Prakasam ခရိုင်အတွင်းတည်ရှိသည်. သငျသညျပြားဝယ်နိုင်, အုပ်ကြွပ်, ကောင်တာများ, နှင့်ဤကျောက်အတွက်အထိမ်းအမှတ်.
Tan ကဘရောင်းကကျောက်ဖြစ်ကောင်းကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအညိုအရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကပုံစံအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးသွန်းပန်းပွင့်နှင့်အတူလှပသောအညိုရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအညိုရောင်အရောင် tan အရောင်ရောစပ်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့် Tan ကဘရောင်းကကျောက်၏နာမတော်ကိုရရှိသွားတဲ့. ဤသည်လှပသောအညိုရောင်ကျောက်၏ကျောက်မိုင်း Telangana ၏ Karimnagar အတွက်တည်ရှိသည်.
အဆိုပါ Tan ကဘရောင်းကကျောက်ကျယ်ပြန့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်, Benchtops, ရေချိုးခန်းရေဆေးအင်တုံ, မြို့ရိုးကိုဝတ်, ခင်းနှင့်အခင်း. Tan ကဘရောင်းကကျောက် ပိုလန်အတွက်ရရှိနိုင်, Flamed, သားရေနှင့် Lapatto ပြီး.
ဤသည်စီမံကိန်းများကိုတစ်စျေးပေါကျောက်များနှင့်အလွန်ကောင်းလှ၏. ဤသည်ကျောက်ထိုကဲ့သို့သော USA ကဲ့သို့နိုင်ငံများအတွက်အထူးရေပန်းစားသည်, ကနေဒါ, ရုရှားနိုင်ငံ, အဇာဘိုင်ဂျန်, ဥဇဘက်, ဂျာမနီ, မြောက်အာဖရိက, နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း.
ဒီကျောက်၏လူကြိုက်များအရွယ်အစားကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်အသေးအရွယ်အစားပြားဖြစ်ပါသည်, အုပ်ကြွပ်အတွက် 60*30*1.8 စင်တီမီတာနှင့် 60*60 စီမံကိန်းများအတွက်. သင်တို့သည်ဤအရွယ်အစားနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအရွယ်အစားဝယ်နိုင်.
နယူးမှာ Imperial နီ
နယူးမှာ Imperial နီအနီရောင်နဲ့ကြက်သွေးကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျမီးဖိုချောင်ကောင်တာ၌ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, ကြမ်းခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဤသည်ကျောက်သေးငယ်တဲ့ကြီးမားတဲ့နောက်ခံအရောင်မှပန်းပွင့်ရှိတယ်.
ဒီကျောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Madhya Pradesh ပြည်နယ်အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများပေမဲ့, အားလုံးစက်ရုံများကို Rajasthan အတွက်တည်ရှိသည်. ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအထိမ်းအမှတ်နှင့်အထိမ်းအမှတများအတွက်အလွန်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းရေချိုးခန်းနှင့်ပြင်ပဧရိယာကိုအခင်း၌ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
နယူးမှာ Imperial ကျောက်၏အဓိကစျေးကွက်ရုရှားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတာ့ခ်မင်နစ္စတန်အဖြစ်ဟောင်းများရုရှားနိုင်ငံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်, ဘယ်လာရုစ်, အဇာဘိုင်ဂျန်, ယူကရိန်း. ဤသည်ကျောက်ပိုလန်လည်းရေပန်းစားသည်, ဂျာမနီ, အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံ.
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အထူရှိ New မှာ Imperial နီကျောက်၏ပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်ဝယ်နိုင်.
မြစ် White ကအိန္ဒိယကနေအကျော်ကြားဆုံးအဖြူရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာပုံစံအတွက်မြစ် type ကိုသွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်.
မြစ် White ကကျောက်၏ကျောက်မိုင်းအဆိုပါ Andhra Pradesh ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီးနေကြတယ်.
ဤသည်ကျောက်အများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အခင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်. သင်တို့သည်လည်းရေချိုးခန်းနှင့် Backsplash အတွက်အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဤလှပသောကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
ဒီကျောက်၏ tiles စံကိုက်ညှိအတွက်ရရှိနိုင်ပါ 1 စင်တီမီတာ, 1 ~ 1.2 စင်တီမီတာ noncalibrated, နှင့် 1.8 စင်တီမီတာ. အုပ်ကြွပ်အတွက်အထူသည်းခံစိတ်သုညရန်ဖြစ်ပါသည်2မီလီမီတာ.
မြစ် White ကကျောက်များအတွက်အဓိကစျေးကွက်အာဂျင်တီးနားဖြစ်ပါသည်, ယူအက်စ်အေ, ကနေဒါ, ဂျာမနီ, ပိုလန်, စပိန်, နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ. ဤသည်ကျောက်စအဖြစ်ဟုခေါ်သည် မိုးကြိုး White ကကျောက် အလွန်ပါးလွှာအနက်ရောင်လှိုင်းတံပိုးနှင့်အတူတောက်ပသောအဖြူရောင်အရောင်ကြောင့်.
Alaskan White ကကျောက်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်လူသိများ alaska White ကကျောက်သို့မဟုတ်သာမန်. ဒီကျောက်၏နောက်ခံဒဏ်ငွေသွေးပြန်ကြောနှင့်ကြီးမားသောပန်းပွင့်နှင့်အတူအဖြူရောင်မုန့်ဖြစ်ပါသည်.
ဤသည်ကျောက်ကို Rajasthan အိန္ဒိယပြည်နယ်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဒီကျောက်၏ကျော်ကြားမှုကို USA အတွက်အလွန်မြင့်မားသည်, ထိုသို့တစျဦးဖွစျသညျ USA တွင်အများဆုံးရောင်းချအိန္ဒိယကျောက်. ဒီကျောက်၏နာမတော်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးအ Alaskan ဒေသအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေသည်.
ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, ဒီကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်2စင်တီမီတာနှင့်3သာစင်တီမီတာအထူပြား. ဤလှပသောအဖြူရောင်ကျောက်၏ tiles အမိန့်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်. alaska White ကကျောက် အများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်.
ဧဒုံရောင်စုံပု Karnataka ပြည်နယ်အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ကြမ်းခင်းများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, အထိမ်းအမှတ်, နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ. သင်သည်သင်၏ကောင်တာများအတွက်အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဤသည်ကျောက်ပိုလန်အတွက်အများဆုံးရောင်းကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ, ဂျာမနီ, အယ်လ်ဘေးနီးယား, ရိုမေးနီးယား, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဆလိုဗက်ကီး, ဆလိုဗေးနီး, နှင့်အခြားဘောလ်တစ်နိုင်ငံများ. ဧဒုံ Multi ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်.
Paradiso Bash မှာ / စံတင်လောက်သော
Paradiso Bash မှာနဲ့ Paradiso Classico မိုဃ်းအုံပုံစံနှင့်အတူလှပသောကျောက်များမှာ. အဆိုပါ Classico ပိုပြီးခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် Bash မှာပိုပြီးမီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါသည်. ဤအကျောက်နှစ်ခုစလုံးကြော့နှင့်ရှာနေလျောက်ပတ်များမှာ.
အဆိုပါ Paradiso ကား Bash နှင့် Classico ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်. ဤလှပသောကျောက်၏အခင်းလည်းအသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ Paradiso ကား Bash နှင့် Paradiso Classico ဥရောပစျေးကွက်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များ. ထိုကဲ့သို့သောစပိန်အဖြစ်နိုင်ငံများ, အီတလီ, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ, နှင့်ရိုမေးနီးယားကဒီကျောက်တွေအများကြီးဝယ်ဖို့.
သငျသညျပြားအတွက် Paradiso ကျောက်ဝယ်နိုင်, အုပ်ကြွပ်နှင့်အထူးဖြတ်အောက်မေ့ဖွယ်အရွယ်အစား.
မွန်း White ကကျောက်လည်းကက်ရှမီးယားပုလဲကျောက်အဖြစ်လူသိများသည်. ဒါဟာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကက်ရှမီးယား White ကကျောက်၏နာမတော်ကက်ရှမီးယားပုလဲတယ်. ဤသည်ကျောက်ပုလဲ type ကိုပန်းပွင့်နှင့်အညို garnets နှင့်အတူအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်.
ဤသည် Andhra Pradesh ၏အိန္ဒိယပြည်နယ်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့ကျနော်တို့ရဲ့ Hyderabad နှင့် Ongole စက်ရုံမှာပြု.
ညီညွတ်သောပြည်နယ်အိန္ဒိယကနေမွန်း White ကကျောက်၏အကြီးမားဆုံးဖောက်သည်ဖြစ်ပါသည်, ဒီကျောက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်လည်းမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဘို့အလွန်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကဒီကျောက်အတွက်ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားပြားဖြတ်.
ကက်ရှမီးယားဖြူဖြစ်ကောင်းအိန္ဒိယကနေအများဆုံးအထင်ကရအဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤလှပသောကျောက် Madurai ၏အိန္ဒိယပြည်နယ်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါကက်ရှမီးယား White ကအညိုရောင် garnets နှင့်အတူမီးခိုးရောင်နှင့်အညိုရောင်သွန်းလောင်းနှင့်အတူလှပသောအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်.
သငျသညျကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလွန်ကြီးမားလေဆိပ်စီမံကိန်းများကို၌ဤကျောက်မြင်ကြပြီစေခြင်းငှါ. ဒါကစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်, အိန္ဒိယကနေခက်ခဲပြီးပိုယူနီဖောင်းပစ္စည်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bangalore စက်ရုံမှာကက်ရှမီးယား White က process.
ကက်ရှမီးယား White ကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရေပန်းစားသည်, ဥရောပ, အမေရိကန်, အရှေ့ပိုင်းအလယ်ကမ္ဘာကြီးကိုသွင်းကုန်ကက်ရှမီးယား White ကကျောက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု. ကျနော်တို့ပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်ပုံစံ၌ဤကျောက်ဖြတ်.
အပြင်ကဤမှသည်, ထိုကဲ့သို့သောကန္တာရဘရောင်းအဖြစ်အများအပြားကျောက်ရှိပါတယ်, rosy ပန်းရောင်, crystal အဝါရောင်ကျောက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအဖြစ်ပြည်တွင်းကအိန္ဒိယစျေးကွက်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်.